Njirimara, Osisi na osisi nke Osimiri Tigris | Netwọk Mgbasa Ozi
Taa, anyị ga-ekwu maka otu osimiri a ma ama na mpaghara Mesopotamia. Ọ gbasara Osimiri Taịgris. Osimiri a jikọtara ya na Osimiri Yufretis ebe aha ya pụtara "ala n'etiti osimiri." Osimiri abụọ a na-amalite usoro ha n'otu n'otu mana ha ruru ebe ha sonyere wee ghọọ nnukwu osimiri. Osimiri ndị a bụ otu n'ime ihe ndị kachasị mkpa iji nweta mmiri maka mmepeanya ebe ha nwere ike ịmalite ịmalite ụmụ anụmanụ.
N’isiokwu a anyị ga-ekwu maka njirimara na mkpa Osimiri Taịgris.
1 Osisi na mmiri nke Osimiri Tigris
1.1 Mkpa akụ na ụba nke Osimiri Tigris
Osimiri Taịgris nwere ọsọ ọsọ na ọsọ ọsọ karịa Euphrates. Ọ gafere Syria, Turkey, na Iraq na Southwest Asia. Amụrụ ya ka ọ dị ihe dịka kilomita iri atọ site n’osimiri nke ọzọ na Ọdọ Mmiri Hazar na mpaghara Ugwu Taurus. Ọ na-esite n’ebe ọwụwa anyanwụ wee ruo na ndịda maka kilomita 30 site na ala ndị Turkey. Na Syria ọ dịghị eme ogologo oge, ma ọ dịghị ihe ọzọ na-agafe maka kilomita 44.
Ebe ọ banyere Osimiri Yufretis dị nso na obodo Al-Qurnah. Njikọ nke osimiri abụọ a na - eweta mmiri ọhụrụ nwere aha Shatt al-Arab nke na - asọba n’Oké Osimiri Peshia.
Osimiri Tigris dị ezigbo mkpa n'ihi na ọ bụ isi iyi nke mmiri dị mma na nri n'ihi ọtụtụ azụ dị na ya. N'ime njem niile anyị nwere ike iso gị ka ị na-agabiga obodo ndị ọdịbendị na akụ na ụba dịka Mosul, Baghdad, na Samara. Mpaghara ndị a niile kpọrọ nkụ na mmiri ozuzo, ya mere, onyinye mmiri dị mma n'akụkụ osimiri a dị mkpa.
Ogologo ogologo Osimiri Tigris na-eme atụmatụ ịbụ ihe dị ka kilomita 1850. Mkpokọta ụgwọ ahụ ruru ihe dị ka kilomita 375000 ma na-ewepụ ihe dị ka kilomita 1014 kwa nkeji nke mmiri. Osimiri a ma ọ bụ na ọ bụghị naanị na-esonyere Yufretis iji mee ka ọ na-asọba, mana mmiri ụfọdụ dịka Great Zab, Little Zab, Diala, Botan, Garzar na Jabur na-erikwa ya.
Enweghị ọtụtụ data banyere mmalite na mmegharị nke osimiri a, n'agbanyeghị na amaara ya na ọ nọ na-arụ ọrụ kemgbe ihe karịrị 13 nde afọ. Igba mmiri a ogologo oge agbanweela usoro mbara ala nke na-eme ka ụfọdụ olulu na ndagwurugwu dị n'akụkụ ala.
Osisi na mmiri nke Osimiri Tigris
Osimiri a dara ogbenye na ụdị ihe dị iche iche ebe ọ bụ na a maara ụdị azụ 55. N'ime ụdị azụ a niile nke 46 bụ ụmụ amaala na 7 nwere nsogbu. Nke ahụ bụ, e nwere ụdị asaa dị na vidiyo a ma ọ bụghị n’ebe ọ bụla n’ụwa niile. Anyị nwekwara ụdị amphibians 6 n'etiti ndị Ọkpụkpụ Neurergus. Nke a bụ otu n'ime amphibians kacha sie ike ịdebe, yabụ ndị nwere mmasị ịmata ụmụ anụmanụ na-achọ ịnwa ịlele ma ha ga - enweta foto.
Fọdụ n’ime azụ ndị a kacha mara amara bụ Tenualosa ilisha, Oxynoemacheilus frenatus, Leuciscus vorax, Cobitis avicennae na Salmo tigridis. O nwekwara ụfọdụ anụmanụ ndị na-enye ara ara na mmiri ọgwụ ndị a hụrụ n’ọzara na apịtị nke osimiri a. Anyị na-ahụ ụdị vivalve mollusk nke akaụntụ a kpọrọ Unio crassus na òké dị ka mammals akpọ Nesokia indica na Nesokia bunnii.
Ọ bụghị na osimiri a pụtara maka osisi na anụmanụ dị iche iche na ọtụtụ ụdị ya amaghị. Otú ọ dị, ihe dị mkpa ha nwere bụ na ha bụ ụmụ anụmanụ na ndị amachaghị.
Mkpa akụ na ụba nke Osimiri Tigris
Enyere mkpa nke mmiri nke osimiri a n'ihi na ha na-asọ site na mpaghara ugwu ma ọ naghị adị mfe iji oge gara aga. N'agbanyeghị nke a, ọ bụ osimiri dị ezigbo mkpa maka azụmahịa yana obodo ndị dị mkpa n'akụkụ mmiri dịka Baghdad na Mosul. Osimiri a dị mkpa karịa Euphrates.
A na-eji mmiri mmiri eme ihe maka mmiri nke ihe ọkụkụ na maka oriri nke Ọhaneze. Site na mbata nke ike imeghari ohuru, a na-ejikwa mmiri maka ọgbọ nke ike hydroelectric. Ọtụtụ n'ime arịa ndị a na-arụ n'akụkụ osimiri a na-arụ ọrụ iji gbochie idei mmiri na ịchekwa mmiri ọ drinkingụ drinkingụ. Igba nke osimiri a na-enye ohere igodo ọ bụ ezie na ọ bụ nanị obere obere ụgbọ mmiri pere mpe.
Bido na narị afọ nke XNUMX, azụmahịa niile sitere na mmiri ya belatara nke ukwuu n'ihi iwu okporo ụzọ na okporo ụzọ. Enwere mmetọ mmiri gburugburu obodo niile nke Rivera. Dị ka a tụrụ anya ya, ọrụ mmadụ na mpaghara ndị dị n'ụsọ oké osimiri bụ ndị na-emepụta ụfọdụ mmetụta na mmiri. N’ebe ndị bụ́ ugwu ugwu, tinyere Iraq, àgwà mmiri ahụ yiri ka ọ dị ezigbo mma. Ebe ọtụtụ mmetụta a na-ebili dị na mgbada.
A na - emetụta ahụike osimiri site na oke oke ikuku ma na mkpokọta nnu na sedimenti. Nke a bụ n'ihi okpomọkụ dị elu na evaporation na-aga n'ihu na mmiri. Ogo nke ala na mpaghara ala na-ebelata n'ihi mgbanwe ihu igwe na ala drainage na-adịghị mma. Iji zere oke mmiri e wuru arịa ndị gara aga na ebe kachasị ukwuu (ebe Osimiri Taịgris na Yufretis na-ezute), mana ọ bụ ezie na ala ahụ enweghị ezigbo ọwara mmiri ka mmiri ahụ wee mechaa na-agbakọta ma na-ebute obere idei mmiri.
Ka ọ dị ugbu a, a na-emetọ osimiri a karịsịa n'oge ọkọchị. Nke a bụ n'ihi mkpofu mkpofu na mmiri ya nke na-enyeghị aka na mmetọ, kamakwa ịhapụ ala adịghị mma na isi na-adịghị mma. Na mgbakwunye, enwere mmiri mmiri mmiri si na nsị mmiri na ebe a na-egwupụta ájá ndị na-emerụ ahụ nke ahịhịa na ahịhịa.
Enwere m olileanya na iji ozi a ị nwere ike ịmụtakwu banyere Osimiri Tigris.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Geology » Osimiri Taịgris